Xildhibaannada Galmudug oo u fadhiisanaya Maanta mooshinka ka dhanka ah madaxweyne ku-xigeenka | Raadgoob
Xildhibaannada Galmudug oo u fadhiisanaya Maanta mooshinka ka dhanka ah madaxweyne ku-xigeenka
Wararka Ka imaanaya magaalada Dhuusa-Mareeb ee xarunta maamul gobolleedka Galmudug ayaa sheegaya in uu soconayo qaban qaabada kulan la doonayo in looga dodo mooshin ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka Maxamed Cabdi Xaanshi Carabey.
Xildhibaanno gaaraya 97 mudane ayaa maalintii shalay mooshin ka keenay Madaxweyne kuxigeenka Maxamed Xaashi Carabey oo ku sugan magaalada Cadaado, waxaana Xildhibaanada ku sugan Dhuusamareeb ay maanta bilaabayaan dooda ugu horeysa, iyadoo maalinta berrina cod u qaadaya.
Lama oga in isla maanta ay codka kalsoonida u qaadayaan madaxweyne ku-xigeenka iyo in kale, hasse ahaatee mooshinka la soo gudbiyay ayaa ah kalsooni kala noqosho.
Maalintii shalay xildhibaanno ku shiray Cadaado ayaa sheegay in kalsoonidii kala noqdeen madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo dhankiisa warka arintaa ku saabsan beeniyay isaga oo sheegay in Cadaado aysan joogin xildhibaanno kulan yeelan kara..
Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ku eedeeyay dowladda Federaalka inay faragelin ku heyso Galmudug, isla markaana ay gadaal ka riixeyso Maxamed Xaashi Carabey iyo Cali Gacal Casir.
Magaalooyinka Dhuusa-Mareeb iyo Cadaado ayaa fadhi u kala noqotay labada dhinac ee uu khilaafka u dhaxeeyo, waxaana Galmudug qarka u saaran tahay inay yeelato Labo Guddoomiye Baarlamaan iyo labo Madaxweyne